एमालेको प्रश्न बुटवल र जनकपुर किन महानगर भएनन् ? | Mechikali Daily
एमालेको प्रश्न बुटवल र जनकपुर किन महानगर भएनन् ?
Posted By: Mechi Kalion: १० जेष्ठ २०७४, बुधबार ०५:२६
काठमाडौँ,जेठ ९ । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले मनोनयन मिति तोकिएको अवस्थामा स्थानीय तहको संख्या बढाउँदा दोस्रो चरणको चुनाव नै हुन नसक्ने भन्दै स्वीकार्य नहुने जनाएको छ । साथै उसले वीरगन्ज र विराटनगरलाई महानगर बनाउँदा बुटवल र जनकपुरलाई किन छुटाइएको भनेर प्रश्न समेत उठाएको छ ।
मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षले चुनाव जित्न अनुकूल स्थानीय तह बनाउने गरी एमालेले जित्ने ठाउँलाई फेरबदल गर्नका लागि मात्रै संख्या बढाएको आरोप लगाए । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई देखाइए पनि सत्तापक्षले आफ्नो चुनावी प्रयोजन पूरा गर्न खोजेको बताए ।
ओलीले भने, ‘हिजो हामीले बिराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज र बुटवललाई महानगरपालिका बनाऔँ भन्दा नमान्ने कांग्रेस होइन ? अहिले हामीले उम्मेदवार तय गरेर चुनावमा लागिसकेको अवस्थामा गाउँपालिका नै गायव गरिएको छ । यो कुरा मान्य छैन ।’ तपाईहरुको विरोध जानकारीका लागि मात्रै हो कि अरु केही गर्नुहुन्छ ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा ओलीले एउटा दृष्टान्त सुनाए ।
उनको संकेत सरकारले मानेन भने कडा रुपमा प्रस्तुत हुने खालको थियो । ओलीले भने, ‘हलो जोत्ने मान्छेले हातमा लठ्ठी बोक्छ, किताब बोक्दैन । किनकि किताब देखाएर गोरुले टेर्दैन । अहिले हामीले किताब देखाएका छौँ । अरु कुरा मैले भन्नु पर्दैन ।’
ओलीले राष्ट्रिय जनता पार्टी र मधेशी मोर्चालाई पनि लचिलो भएर चुनावमा आउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘धेरै पार्टी मिलेर राजपा बनेको छ । यो राम्रो कुरा हो । अब उहाँहरुले नाममा राष्ट्रिय राखे जस्तै व्यवहारमा पनि राष्ट्रिय चरित्र देखाउनुहोस् । चुनावबाट एजेण्डा स्थापित गरौँ ।’
देउवामाथि सत्ताभोगीको आरोप
फरक प्रंसगमा एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ‘अहिल्यै प्रधानमन्त्री देऊ’ भनेर लोकलाज बिर्सिएको आरोप लगाए । उनले २०÷२२ दिन पनि पर्खिन नसक्ने भन्दै देउवामाथि सत्ताभोगीको आरोप लगाए । देउवाले प्रचण्डलाई कुर्सी मागेर ‘थाल खाऊँ कि भात खाऊँ’को अवस्थामा पु¥याएको टिप्पणी समेत गरे ।
ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नै हुँदैन, मलाई कहिले कुर्सी दिने भन्छन् । बिचरा प्रधानमन्त्री ! आत्तिएर थाल खाऊँ कि भात खाऊँको अवस्थामा हुनुहुन्छ ।’ उनले अघि भने, ‘मैले बिहान तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा पनि कुर्सी चाहियो भन्ने नेताजीलाई सोधेँ, लोकलाज भन्ने केही हुन्न ? २०÷२२ दिन पनि पर्खिन नसक्ने ? यस्ता मान्छेले अस्थिरता ल्याए ।’
ओलीले देउवा सत्ताका लागि जे पनि गर्न सक्ने नेता भएको भन्दै कुर्सीका लागि कांग्रेस कार्यकर्तालाई अरुकै चिन्हमा भोट हाल्नका लागि मुन्ट्याएर पठाएको टिप्पणी समेत गरे । एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘लोकतन्त्र भन्ने त उहाँलाई केही मतलबै छैन । हुन पनि नेपालमा लोकतन्त्रको आन्दोलन चलिरहेका बेला बेलायतका गल्लीमा बरालिँदै हुनुहुन्थ्यो । नेपाल फर्केर गृहमन्त्री भएपछि घरमा बसेको बालकलाई गोली हानेर मार्दा ‘गोलीको आँखा हुँदैन’ भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिनुभयो । यस्तोबाट के अपेक्षा गर्ने ?’
एमाले अध्यक्ष ओलीले देउवा प्रधानमन्त्री भए दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव र त्यसपछि प्रदेश तथा केन्द्रीय संसदको चुनाव हुनेमा समेत आशंका व्यक्त गरे । यो एउटै चुनाव भएकाले चुनाव नसकी सरकार फेर्न नमिल्ने ओलीले बताए । आफूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा रोक्नु भन्दा पनि चुनावको सुनिश्चितता र विधि प्रक्रियाका लागि यो कुरा उठाएको ओलीको दाबी छ । ‘राजीनामा दिनु थियो भने चुनावअघि नै दिएको भए हुन्थ्यो । होइन भने अब चुनाव सकेर दिए भयो । २० दिन पनि पर्खिन नसक्ने कस्तो लोकलाज नभएको मान्छे भेटिए ।’
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले यदि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर संसदमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया थालनी भएमा एमालेले त्यसमा भाग लिने बताए । तर, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिने निर्णय भने पार्टीले अहिलेसम्म नगरेको उनले प्रष्ट पारे । ओलीले भने, ‘राजीनामा दिनुभयो भने हामीले रोक्ने कुरा त भएन, प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियामा भाग लिन्छौँ । सकेसम्म सहमतिको प्रक्रियामा जाउँ भनेका छौँ । कांग्रेसले विगतको गल्तीबाट प्रायश्चित गर्ने हो भने सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकिन्छ ।’